Gaas Iyo Camey Oo Kulankii Ugu Horreeyey La Yeeshay Wasiirada Maamulka Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 29 January 2014 4 April 2019
Garowe – Mareeg.com: Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland C/weli Cali Gaas iyo C/xakiim Camey ayaa manta kulan isbarasho ah Garowe kula yeeshay golaha wasiirada maamulkaas ee shalay lagu dhawaaqay.
Wasiirada qaar ayaa sheegay in shirka si wanaagsan ku soo dhamaaday, sidoo kale xubnaha kulanka joogay ayaa soo dhoweeyey jagooyinka loo magcaabay iyagoo balanqaaday shaqo wanaagsan iyo is bedel.
Wasiirada qaar ayaan weli gudaha dalka Soomaaliya joogin balse waxaa la filayaa inay dhaqso u yimaadaan, waxaana fadhiga is barashada maanta ka maqnaa 10 wasiiro iyo ku xigeeno isugu jira.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in wasiirrada ay muhiim tahay in ruux walba uu kasoo baxo shaqada loo igmada, iyadoola sheegay inay dhawaan hortegi doonaan wasiirrada cusub xildhibaannada baarlamaanka Puntland si codka kalsoonida loogu qaado.
Madaxweynaha iyo wasiirada waxay isla soo qaadeen intii shirku socday habka wada shaqaynta dowladda cusub, madaxweynaha ayaa ku baaqay in isku xirnaan shaqo iyo hufnaan la muujiyo, sida ay noo sheegeen ilo goob joog ahaa.
Xukuumada cusub ee Prof. Cabdiweli Gaas ayaa cudud muuqata siisay haweenka oo mudo dheer u doodayey inay helaan xuquuqdooda siyaasadda, haweenka la magcaabay qaarkood ayaa kulanka maanta joogay.
Golaha wasiirrada cusub ee Puntland ee uu soo dhisay C/weli Gaas ayaa ka badan xukuumadihii horay u soo maray maamulka Puntland, waxaana door muuqda ku leh dhallinyarada iyo haweenka, halka sidoo kale xukuumadda lugu soo daray wasiir-u-dowlayaal aanay xukuumadihii ka horeeyay lahayn.